Isilimela 25, 2018 admin
Bitmain kwi indlela yayo ku 51% ulawulo phezu BTC Mining
Bitman, eyakha iyeyona inkulu ehlabathini yeetshipsi .GOKO kunye rigs kwemigodi, ngoku uzisa eminye imiba kuluntu crypto njengoko iba sinamandla kakhulu kwemigodi bitcoin. Ngokuhlanganisa share lorhwebo sodade kumaqula ezimbini ezinkulu BTC lezemigodi Bitmain onelungelo ngokwangoku, Antpool ne BTC.com, siyakwazi ukubona ukuba inkampani ayikho kude emva kokuba 51% ukulawula yonke inethiwekhi.
Ngelo xesha, inkampani isalele 9% emva oku kujoliswe kuko, kodwa zikho izinto Bitmain unokusebenzisa Bitcoin amandla alo cash hashing, esebenzisa ukuvumelana POW efanayo algorithm ukuvala lo msantsa.
Inkxalabo apha kukuba, ukuba kukho inkampani eyodwa ulawula a 51% uninzi yonke pool kwemigodi, seliphumile inethiwekhi blockchain yonke ivulekile uluhlu lwemiba abaxhaphaza, kuquka-phindo inkcitho kunye nolawulo eyingozi iintengiselwano.
yokuzenzisa, oku kubonakala kungenakwenzeka ukuba Bitmain, Xa ndinonikwa i $ 3-4 billion ngengeniso yenkampani ingxelo kunyaka ophelileyo, kodwa xa Bitmain lophule sesichengeni, abahlaseli kwadingeka ukulawula womnatha Bitcoin.
Uhlaselo efana nale kukunika imigewu ulawulo yonke indalo block elizayo, kodwa bitcoins entsha yeenqubo ayikwazanga esidalwe ngumntu ngenxa yobume dlt. Abahlaseli kuya kuba nzima ukulawula iibhloko esele echaziweyo ileja jikelele, ingakumbi abo kamva wadala. Ngesi sizathu, kokuhlaselwa 51% Akunjalo ngokwaneleyo ukuzisa phantsi kwinethiwekhi ngokwayo. imali kakhulu double ayikwazanga, kunjalo, kukhokelela yokuwa elipheleleyo ukuzithemba lwemarike kunye nokunciphisa cryptocurrency.
Oku Esi yayingesosihlandlo sokuqala ukuba le ngozi olubachaphazela inethiwekhi Bitcoin. ngoJulayi 2014, Ghash.io outperformed BTC ngu 50%, kodwa abasebenzi ngazwinye isigqibo ukunciphisa isabelo lweentengiso ukuthintela amathuba uhlaselo olunjalo. kunjalo, asingawo onke amachibi imigodi kuba iqondo elifanayo kusengaphambili, njengoko neminatha yomibini blockchain Ethereum-based, Interface ne Shift, bobabini 51% wahlaselwa ngo Agasti 2016.
Alipay Hong Kong uqala inkonzo soxolelo blockchain for Philippines
UMbovane Financial, lobulungu yentlawulo eChina e-commerce giant Alibaba, iye yasungula inkonzo zokuhlala cross-umda blockchain-based ukuba abathengi.
Kuya ekuqaleni kuqaliswa ukuba ababoleki ngokuthumela imali phakathi Hong Kong kunye Philippines.
Ngokuhlanganisa inkonzo yayo AlipayHK ne GCash - inkonzo intlawulo Philippines-based mobile - usebenzisa obuchwepheshe blockchain, UMbovane Financial uthi inkonzo uya kubasindisa abasebenzisi ekubeni ukuya njengabalamli yaye iya kummisa kushishino ngaphakathi “imizuzwana.”
Imiba ifoni $ 250M
Uphuhliso enkulu ukusebenzisa iye nje ingxelo – i stablecoin liye lanika nje $250 million.
Lo kunikezelo lwamva ibeka unikezelo lilonke ifoni (Ushdt) ngaphezu $3 billion.
Litecoin umsunguli Charlie Lee ubhale bakhe 781,000 twitter abalandeli ukuba ngokuqhelekileyo oshukunyiswa ezinjalo kwandulela uhambo ixabiso:
“Ngokubanzi, oku kuye kwaba siphu- ixabiso ukuya phezulu. Ifoni kokuba eshicilelweyo xa USD abantu ngotyalo ukufumana USDT umva. Le USDT iya kusetyenziselwa ukuthenga crypto. Oku kuyafana umntu ufaka $ bungange 250 utshintshiselwano. Kanjalo, oko akuthethi ukuba uya kuthenga ngoko nangoko. DYOR”
Ingxelo Daily Market Kraken for 24.06.2018
$248M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Blockchain News 19 EyoMqungu 201...
platform entsha Cryptocurrency kaThixo ...
KUYA BITCOIN GCINA ungabonakali? XR...
Post Previous:Blockchain News 24.06.2018
Post Next:Blockchain News 26.06.2018
EyoMdumba 14, 2019
altcoin bitcoin bitcoin analysis bitcoin bottom Bitcoin crash bitcoin crash over iindaba bitcoin bitcoin news today Bitcoin price bitcoin price growth bitcoin price news bitcoin price rise bitcoin technical analysis bitcoin today block chain BTC btc crash btc news btc today cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency market cryptocurrency news cryptocurrency trading crypto lark crypto news eos ethereum ethereum analysis ethereum news ethereum price exchange how to make money imali investing bitcoin is bitcoin done crashing litecoin neo iindaba portfolio yama- sinh when to buy bitcoin xrp